(tonga teto avy amin'ny Zanahary (anaran-tsamirery))
Amin'ny Ntaolo malagasy dia atao hoe andriamanitra na zanahary, no ilazany ireo fanahy manana hery sy fahalalana ary hasina ambony lavitra noho ny an'ny fanahy hafa sy ny an'ny zavaboary rehetra. Amin'ireo zanahary ireo dia inoan'ny Ntaolo ny fisian'ny iray izay antsoiny hoe Zanahary na Andriamanitra fotsiny, izay lehibe indrindra noho ireo andriamanitra ireo, sady mpahary, manam-pahefana hanome na hanaisotra ny ain'ny zavamananaina.
Tamin'ny nifampikasohan'ny kolontsain'ny Ntaolo malagasy amin'ny kolontsaina silamo dia naetry voninahitra tsy ho andriamanitra ireo andriamanitra maro hafa ninoan'ny Malagasy, ka i Zanahary na Andriamanitra tokana ihany no andriamanitra. Mbola hita taratra ao amin'ireo fedrà sy fomba fiteny nolovana tamin'ny Ntaolo malagasy anefa ny finoany ny fisian'ny andriamanitra maro sy ny fahafahan'ny fanahy hafa, isan'izany ny fanahin'ireo razana, ho lasa andriamanitra. Maro noho izany fivoaran'ny finoan'ny Malagasy izany ny mpanoratra mivoy ny maha tokana ny andriamanitra nivavahan'ny Ntaolo malagasy, na dia fantatra fa tsy vahoaka nino andriamanitra tokana avokoa no nipoiran'ny razamben'ny Malagasy.
Ny ankamaroan'ireo vahoaka nitondra ny kolontsainy teto Madagasikara (ny Afrikana, ny Arabo, ny Indiana, ny Indôneziana, sns) no mivavaka amin'andriamanitra maro. Ohatra, maro amin'ny fivavahan-drazana afrikana no mino ny fisian'ny andriamanitra maro. Fantatra koa fa ny Arabo talohan'ny nisian'ny fivavahana silamo dia nivavaka tamin'andriamanitra maro. Ny Indiana koa, afa-tsy ireo Silamo na Kristiana ohatra, dia mivavaka amin'andriaanitra maro.
Noho izany rehetra izany dia miodina eo anelanelan'ny fivavahana amin'andriamanitra tokana sy amin'andriamanitra maro ny finoan'ny mpandala ny fivavahan-drazana malagasy. Izany no mahatonga ny mpanoratra sasany, izay te haneho ny maha tokana ny andriamanitra nivavahan'ny Ntaolo malagasy, hihevitra fa ireo andriamanitra heno amin'ny fitenenana na fitokavana dia fisehoan'ilay andriamanitra tokana, dia i Zanahary na Andriamanitra, fa tsy tena andriamanitra.
1.2 Ny hevitry ny teny hoe Andriamanitra sy Zanahary
2 Ny andriamanitra ninoan'ny Ntaolo malagasy
2.1 Ny asan'ny andriamanitry ny Ntaolo malagasy
3 Ny isan'ny andriamanitry ny Ntaolo malagasy
3.1 Araka ny fedrà maIagasy sy ny fitokavana
4 Ohabolana sy fitenenana momba an'Andriamanitra na an'i Zanahary
4.2 Ohabolana sy fitenenana momba an'i Zanahary
Endriky ny anaranaHanova
Ny anarana hoe andriamanitra no miasa matetika amin'ny faritra afovoan-tany. Io no nohazonin'ny fivavahana kristiana, sady lasa anaran-tsamirery (Andriamanitra) rehefa nandika ny Baiboly amin'ny fiteny malagasy.
Faheno manerana an'i Madagasikara io anarana hoe andriananahary io. Mety hiseho amin'ny endrika samihafa io teny io arakaraka ny faritra: andrenañahary, ndreñanahary, andrianañahare, andrañahary, andrañahare.
Faheno matetika ny anarana hoe zanahary indrindra fa any amin'ny faritra tsy afovoan-tany eto Madagasikara. Mety hiova hoe nanahary io rehefa akambana amin'ny teny hafa. Miovaova koa ny fanononana azy io arakaraka ny faritra: zañahare, nañahare, rañahare, rañahary. Tsy dia faheno matetika ity anarana ity mba hiantsoana na hanaovana toriteny momba an'Andriamanitra ao amin'ny fivavanana kristiana atao amin'ny fiteny malagasy ofisialy.
Ny hevitry ny teny hoe Andriamanitra sy ZanaharyHanova
Raha takarina araka ny fiforonany ny anarana hoe Andriamanitra, araka ny hevitry ny besinimaro, dia azo rasaina hoe: "Andriana manitra". Mitovy aminy ihany koa ny anarana hoe Zanahary, izany hoe, "Izay Nahary", izay namorona ny zavatra rehetra tamin'ny voalohany. Misy koa ny fomba fiteny hoe Andriamanitra-Andriananahary, izay midika "Andriamanitra avo sady mpamorona". I Richardson dia mitatitra ny filazan'ny Malagasy tamin'ny fotoanandrony fa satria tsy hita maso Andriamanitra dia ny fofony manitra no ahafantarana ny fanatrehany.
Ny fisian'ny feon-teny ñ (tononina hoe [ŋ]) ao amin'ireo anarana iantsoana an'Andriamanitra na ny andriamanitra amin'ny tenim-paritra maro no anoheran'ny mpikaroka sasany ny famotoran-tenim-bahoaka mandrasa ny Zanahary ho "izay + nahary", satria ny filazam-potoana lasa amin'ireo fiteny malagasy ireo dia tsy manomboka amin'ny ñ- fa amin'ny n- mandrakariva, toy ny hita amin'ny fiteny malagasy rehetra. Tsy misy resaka fahariana ny ao amin'ny teny hoe Zanahary na Zañahary.
Araka an'i Ferrand, ny teny hoe andriananahary dia avy amin'ny teny hoe adhyia (ilay fisiana andriamanitra niandohan'ny zavatra rehetra) sy ny hoe hari (midika hoe "masoandro") ao amin'ny teny sanskrita sy ireo teny aostrôneziana. Nikambana ireo teny roa ireo ka nanome ny hoe Adhyia-hari (izay midika hoe "andriamanitra masoandro") sy Yang-hari, ("Andriamajitra masoandro). Ny teny malagasy hoe hary ("fahazavan'ny masoandro", "masoandro") dia hita amin'ny teny hoe antoandrobenanahary.
Araka ny itateran-dRazafintsalama azy, ny teny hoe andriamanitra dia avy amin'ny teny sanskrita hoe adya (izay midika hoe "herin'andriamanitra") sy ny teny indôneziana hoe atman (izay avy amin'ny teny hoe manis nipoiran'ny teny malagasy hoe manitra).
Ny andriamanitra ninoan'ny Ntaolo malagasyHanova
Ny asan'ny andriamanitry ny Ntaolo malagasyHanova
Ny mpanoratra Razafintsalama dia mitanisa ny toetra sy ny asan'Andriamanitra araka ny fiteny sy ny finoan'ny Ntaolo malagasy: Andriamanitra no mandahatra, mahita ny miafina izy, mpamaly ny soa sy ny ratsy izy , izy no mahary ny aina, izy no nanome manokana ny vary, izy no nanome ny ody sy ny sampy, izy no manome ny tany sy ny fanjakana
Lavitra sy masina loatra Andriamanitra ka ilaina ny mpanelanelana eo aminy sy ny olombelona, ka isan'ireo mpanelanelana ireo ny Vazimba, ny razana, ny mpanjaka niamboho, sns. Ny razana no ahazoan'ny velona ny hasina avy amin'Andriamanitra. Mpanelanelane koa ny mpisorona sy ny ombiasa.
Ny isan'ny andriamanitry ny Ntaolo malagasyHanova
Tsy mitovy hevitra ny Malagasy sy ny mpikaroka ny amin'ny valin'ny fanontaniana hoe: "Mino andriamanitra tokana sa andriamanitra maro ny Malagasy?"
Araka ny fedrà maIagasy sy ny fitokavanaHanova
I Zanahary dia andriamanitra monina any an-danitra ao amin'ny fedrà malagasy. Heverina ho andriamanitra mpahary izy ka inoana fa niara-niasa tamin'ny andriamanitry ny tany, dia Ratovontany, tamin'ny namoronany ny olombelona. Rehefa maty ny olombelona dia miakatra any an-danitra ny fanahiny fa ny vatany kosa miverina amin'ny tany . Izany no ampiarahana an'i Zanahary amin'ny fanahy ao amin'ny finoan'ny Malagasy sy ny fivavahana amin'ny razana.
Ny Bara sy ny Betsimisaraka dia manana fedrà izay ahitana ny anjara asan'i Zanahary sahanin'ny Masoandro (andriamanitra masoandro), izay mandray ny fanahin'ny olombelona aorian'ny fahafatesana; nefa, heverina amin'ny ankapobeny fa tsy manana toetra masoandro i Zanahary. Misy koa anefa ny Zanahary an-tany (na Zanahary ambany) ankoatry ny Zanahary an-danitra (na Zanahary ambony).
Misy lahy sy vavy ny zanahary, ka misy ny Zanahary lahy sy ny Zanahary vavy. Amin'ny ankapobeny dia heverina ho lahy nefa koa ho tsy vavy tsy lahy i Zanahary. Indraindray dia manambady ny Zanahary ka miteraka lahy na vavy (zanaka lahin-Janahary zanaka vavin-Janahary). Misy koa ny Zanahary kely sy ny Zanahary be. Akoatr'izany rehetra izany dia manana toeram-ponenana samihafa ny Zanahary: Zanahary an-danitra (ambony), Zanahary an-tany (ambany), Zanahary anaty rano, sns.
Ankoatry ny mampisy lahy sy vavy ny Zanahary, na ny Zanahary ambony sy ny Zanahary ambany, dia misy koa ireo Zanahary amin'ny lafin-tany, dia ny ny Zanahary atsinanana, ny Zanahary andrefana, ny Zanahary avaratra ary ny Zanahary atsimo. Heno izany amin'ny fitokavana (fiantsoana azy ireo) rehefa mivavaka ny Ntaolo.
Ireo zavatra nantsoina hoe Andriamanitra na ZanaharyHanova
Amin'ny mpanoratra sasany toa an'i Dahl dia fomba fiteny fotsiny izany fa tsy manafangaro an'Andriamanitra amin'ny razana ny Malagasy.
Hevitry ny mpikaroka ny kolontsaina nentin-drazana malagasyHanova
Tsy mitovy hevitra ny mpikaroka. Ny sasany manaiky ny finoan'ny Malagasy ny fisian'ny Zanahary na Andriamanitra maro (politeisma) fa ny sasany indray mifanohitra amin'izany ka milaza fa tokana ny Andriamanitra inoan'ny Malagasy ntaolo fa tsy maro.
I Petro Lupo, ohatra, dia manohana ny monoteisma malagasy (ao amin'ny boky nosoratany mitondra ny lohateny hoe: Dieu dans la tradition malgache. Approches comparées avec les religions africaines et le christianisme). Toraka izany koa ny hevitr'ireo mpanohana ny fananan'ny Ntaolo malagasy kolontsaina jiosy na hebreo, na ny an'ireo mpitory teny kristiana te hampanaiky ny Malagasy ny efa nahafantaran'ny razany amin'ny fomba tsy tonga lafatra an'Andriamanitra tokana.
I Robert Jaovelo-Dzao kosa miaiky ny politeisma malagasy (ao amin'ny boky nosoratany mitondra ny lohateny hoe: Mythes, rites et transes à Madagascar: angano, joro et tromba Sakalava). Misy ireo mitsofoka anelanelany ka milaza fa tokana ny Andriamanitra ninoan'ny Ntaolo malagasy nefa indraindray miseho amin'ny endrika maro mba hanatanteraka ny asa tiany hatao.
Ohabolana sy fitenenana momba an'Andriamanitra na an'i ZanaharyHanova
Ahafaha-mitaratra ny finoan'ny Ntaolo malagasy ny toetra sy ny asan'Andriamanitra koa ny ohabolana sy fitenenana maro iresahany ny amin'Andriamanitra, araka ny hita manaraka eto:
Ohabolana sy fitenenana momba an'AndriamanitraHanova
Aleo meloka amin'olombelona, toy izay meloka amin'Andriamanitra.
Andriamanitra tsy andrin'ny sasany, andriko ihany.
Andriamanitra tsy an'ny irery.
Aza manao an'Andriamanitra tsy misy ka mitsambiki-mikimpy.
Aza manao vava azon'Andriamanitra.
Aza mandidy alohan'Andriamanitra toy ny mpanotrika akoho.
Aza ny lohasaha mangina no jerena, fa Andriamanitra an-tampon'ny loha.
Boka miteraka (mitoraka) Alahamady, ka hitan'Andriamanitra ny tarehiny.
Mandeha irery, sahalain'Andriamanitra; mandeha roa, sahalain'olombelona.
Ny fikasana no an'olombelona, fa ny didy an'Andriamanitra.
Rafotsibe mita rano: izay hahasoa ataovin'Andriamanitra, na ho rendrika, na ho tafita.
Ohabolana sy fitenenana momba an'i ZanaharyHanova
Petak' orona sy dondon-kandrina : ny iray iva tsy anomezan-tsiny, ny iray avo tsy anomezam-pondro, fa izay vitan-Janaharyifaliana.
Ranomason-Janahary ny harena : zay ilatsahany mahazo anazy.
Rohy ivelany sy boky azo anovozan-kevitraHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andriamanitra_(finoan-drazana_malagasy)&oldid=993853"
Dernière modification le 30 Jiona 2020, à 12:55
Voaova farany tamin'ny 30 Jiona 2020 amin'ny 12:55 ity pejy ity.